Xildhibaanada Baarlamaanka oo dood kulul ka leh Darbiga Kenya ay ka dhiseyso xuduuda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xilligan dood kulul ka leh Darbiga ay Kenya ka dhiseyso Xuduuda, waxaana ajandaha kulankii maanta uu qeyb ka ahaa darbiga, kadib markii ay soo baxday in Kenya ay ku soo durugtay xadka Soomaaliya, isla markaana tirtirtay calaamadihii xadka ee dhinaca Beledxaawo.
Qaar ka mid ah Xildhibaanadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in aan la aqbali karin arrintan, isla markaana darbiga Kenya ka dhiseyso xuduuda uu qeyb ka yahay damaceeda ku wajahan Badda.
Xildhibaan Aadan Madoobe oo ka mid ahaa Xildhibaanadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xilligii uu Guddoomiyaha Baarlamaanka uu ahaa ay ka hor-yimaadeen heshiiskii Badda, isla markaana haatan ay Kenya soo cusbooneysiisay heshiiskaas,
Sidoo kale Xildhibaano kale ayaa ugu baaqay Xukuumadda in arrintan ay si deg deg ah uga hadasho, una yeerto Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya, si wax looga weydiiyo darbiga Kenya ka dhiseyso Xukuumadda.
Dadka deggan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ku soo durugtay xadkii u dhexeeyey labada dal ee ku beegnaa inta u dhaxaysa magaalooyinka Beled Xaawo ee Soomaaliya iyo Mandheera ee Kenya.
Wararka ayaa intaa ku daraya in la tirtirtay calaamado muujinaya halka uu xadku ku egyahay, iyaga oo gudaha Soomaaliya ku soo durgaya, waxaana loo maleynayaa in qorshaha Kenya uu yahay in xadka dhulka ay la sinto kan badda, si labada xuduud ay isku waafaqaan, si ay taas uga saacido muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee kulanka Baarlamaanka oo wali socda, isla markaana goor dhoweyd laga soo laabtay salaadii duhur ayaa waxaa uu yahay mid ka duwan kulamadii hore, maadaama saacado dheeraad ah uu galay dooda ay Xildhibaanada leeyihiin.